Sababta dhabta ah ee loo kireysto Guru Media Media ah | Martech Zone
Sababta dhabta ah ee loo kireysto Guru Media Media
Axad, Sebtembar 26, 2010 Isniin, April 20, 2015 Douglas Karr
Tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaan u shaqeynayay si hagar la'aan ah sidii aan u dhisi lahaa shabakad internet ah oo raacsan, maamul, iyo ugu dambeyntii horumar ganacsi. Hadda, waxaan la kulmay dad raba inay shaqaalaysiiyaan adeegyadayda si aan uga caawiyo inay iyaguna sidaas oo kale sameeyaan. Waqtiyada qaarkood waa shirkad weyn oo leh hibo aan caadi aheyn waana awoodaa inaan wax geeyo. Mararka qaarkood sidaas maahan kiiska oo waxaan bixiyaa adeeg ka duwan.
Sanadahan, waxaan daawaday kuwa kale oo igaga dhaafaya khadka tooska ah waxbadanna waan bartay. Waxa kale oo aan dhaafay qaar kale oo badan… aad u tiro yar ayaa leh buug la daabacay ama meherad ay iyagu leeyihiin oo ku saabsan khibradooda. Waxay i siisay aragti ku saabsan waxa shaqeynaya, waxa aan shaqeyneyn, maalgashiga ay ka boodayaan awooddaada, iyo sidoo kale waxa dhab ahaan dhaawici kara.
Si kastaba ha noqotee, aqoontaas oo dhan runti maahan sababta aad u rabto inaad shaqaaleyso. Macluumaadkaas ayaa jira… waa khadka tooska ah iyada oo la adeegsanayo qoraalladayda hubinta ganacsiga buugga, iyo bandhigyadayda. Haddii aad i raacdo, ama mid kale oo la yiraahdo gurus warbaahinta bulshada, gebi ahaanba dhammaantood waxay macluumaadka ku dhejiyaan bilaash. Waa hubaal - inbadan waxay bixiyaan fursado tababar oo ciriiri ah si ay uhelaan koorso shil (waa sabab weyn in nala daawado annagoo hadlayna)… laakiin ujeedku wuxuu yahay inaad wali heli karto adigoon na shaqaaleysiinin.
Waxaadan bilaash ku heli karin waa awooddeena. Gurusyada warbaahinta bulshada waxay leeyihiin wax soo raac weyn - sida caadiga ah gudahood niche fiican. My niche waa suuq-geynta internetka, suuq-geynta gudaha iyo isku-darka raadinta, bulshada iyo tiknoolajiyada kale ee internetka si loo dhiso ganacsi. In kasta oo aan la tashanayo shirkado badan mowduucyadaas - shirkado kale oo maalgashaday adeegyadayda ayaa raadinaya wax aad uga duwan…
Waxay raadinayaan tayda qirasho si ay u awoodaan maamul dhis dhakhso badan… sidoo kale helitaanka dhagaystayaashayda.
Taageerayaasha, kuwa raacsan, akhristayaasha iyo macaamiisha ayaa ah badeecad qiimo leh maalmahan… gaar ahaan haddii aad sii wadi karto inaad kobciso waxyaabaha soo socda. Dadka qaarkiis waxay i weydiistaan ​​inaan hadlo maxaa yeelay waxay arkeen oo ay u riyaaqeen soo bandhigitaankeyga - laakiin kuwa kale oo aad u tiro badan ayaa iga codsanaya inaan hadlo maxaa yeelay waxay ogyihiin inaan kor u qaadi doono ganacsigooda ama shirkooda dhagaystayaashayda. Haddaan hadlo - Waxaan rabaa inay noqoto dhacdo weyn… lagu iibiyo iyada oo buzz laga isticmaalo internetka oo dhan. Daacadnimo dhan, waxaa jira fursad yar oo aan ku hormarin karo dhacdo aanan ka qeybqaadaneyn simply Si fudud ugama faraxsani iyaga oo ku filan si daacadnimo leh u dhiirrigelinta… dhagaystayaashayduna way sheegi karaan.
Taasi waxay tiri, waxaan uqaataa fursadaha hadalkayga iyo taageeriddeyda mid dhab ah. Si fudud ugama tuuri karo ogolaansho anigoon rumaysan meesha laga soo xigtay - xitaa haddii laygu siinayo lacag. Waxaan la shaqeeyaa shirkado badan oo aanan weligey ku soo sheegin qadka. Maaha inaanan aaminsanahay inay u qalmaan, ee waxay noqonaysaa mid aan khusaynaynin in loo sheego dhagaystayaashayda. Hordhacu wuxuu umuuqanayaa mid aan meesha oolin laguna qasbay.
Waxaan la yaabanahay tirada gurus warbaahinta bulshada kuwaas oo bixiya qoraallo lacag bixin ah, tweets la bixiyo iyo oggolaansho la bixiyo iyada oo aan la hubin inay qiimo u siinayaan dhagaystayaasha. Waxay dhigtaan sawirro farmaajo leh iyaga oo ag taagan qof muhiim u ah si uun ay u bixiyaan dareen ah inay waajib tahay inay ahaadaan kuwo muhiim ah… fiiri sawirka kore;).
Waxaan sameeyaa isku day kasta oo aan kaga fogaado taatikadaas… waxay noqon doontaa mid meel ka dhac ku ah dhagaystayaasha oo aan aad uga soo shaqeeyay in aan dhiso oo aan aakhirkiina khatar geliyo. Waxaan u maleynayaa inay tahay istiraatiijiyad muddo-gaaban lagu kasbado - waxayna qiimo-dhac ku tahay dhagaystayaashooda waqti ka dib. Qaar badan oo ka mid ah lacag ku samee gurus internetka ah sidan samee. Waa inay khiyaaneeyaan oo ay iibsadaan kalsooni si ay ula socdaan shakhsiyadda buuqsan ee ay ku abuureen khadka tooska ah. Dhagaystayaashoodu way yimaadaan oo tagaan markay ogaadaan in lagu khiyaaneeyey.
Haddii aad runti dooneyso joogitaan ballaaran oo khadka tooska ah iyo marin u hel dhagaystayaasha a baraha bulshada, Habka ugu fudud ee tan lagu sameyn karaa waa shaqaalaynta wax weyn baraha bulshada taasi waxay leedahay waxyaabaha soo socda ee aad rabto inaad marin u hesho oo aad ku dhisato maamul. Sida ku xusan tilmaamaha FTC, marwalba waxaan ku sheegayaa inay yihiin macmiil ama in mag la i siinayo ogolaanshahayga. Sababtoo ah waxaan ka taxadiray inaanan dhagaystayaasheyda ku dhufto qof kasta oo raba inuu lacag igu tuuro, dhagaystayaashaydu dan kama lihi inaan lacag la i siiyo Waxay u yimaadeen inay gartaan in xitaa oggolaanshahayga mushaharka bixiyaa had iyo jeer qiimo siin doono.
Shaqaalaynta baraha warbaahinta bulshada ayaa ku siin kara macluumaad muhiim ah iyo la-talin kaa caawin doonta wadista ganacsigaaga… laakiin sababta dhabta ah ee loo shaqaaleeyo mid ayaa ah helitaanka marin ay u leeyihiin dhagaystayaashooda iyo maamulka iyaga oo u maraya oggolaansho. La’aanteed, waddo dheer ayaa kaa horaysa. Iyada oo aad, waxaad ku boodboodi kartaa joogitaanka warbaahinta bulshada iyo maamulka internetka.
Tags: douglas karrseth godinbaraha bulshada
Ma Ku Dejisay Halbeegyo Maamulayaasha Websaydhka?
Ku Hadalka Luqadda Dhageystayaashaada